ब्रसेल्स मा होटल | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | आवास, ब्रसेल्स
आज सम्भावनाहरु आवास। क्लासिक होटेलमा, अनुप्रयोगहरू थप गरियो जुन घरहरू वा अपार्टमेन्टहरू वा कोठा भाडामा लिन अनुमति दिन्छ वा घरपालुवा जनावरहरूको हेरचाह गर्दा आवास खोज्न, उदाहरणका लागि। तर त्यहाँ तिनीहरू छन् जो त्याग गर्दैनन् होटल र यो भन्नु पर्दछ कि आज धेरैजनाले आफ्नो प्रस्ताव र शैली सुधार गरेका छन्।
शैलीको बारेमा सोच्दै र आज मूल्यलाई बेवास्ता नगरी हामी केन्द्रित हुनेछौं ब्रसेल्समा होटलहरू.
लाग्छ कि यस शहरमा मूल्यहरू मागको अधीनमा छन् र तसर्थ, जब पनी युरोपेली संघको सरकारको बैठक हुन्छ, यी मूल्यहरु बढ्छन्। त्यसोभए, प्रस्ताव खोज्नको लागि आवास खोजी साइटमा सामेल हुन कुनै खराब विचार होईन र हामी तल प्रस्तुत गरेका होटलहरूमध्ये एकमा रहनको अवसर गुमाउनु हुँदैन।
यदि तपाईंलाई आतिथ्य को अमेरिकी शैली मन पर्छ भने एक विकल्प हो होटल Aloft ब्रसेल्स शुमान। योसँग एक निश्चित लक्जरी छ, विस्तृत ध्यान दिन विस्तृत, विस्तृत, राम्रोसँग सुसज्जित र आरामदायक कोठाहरू सहित। त्यहाँ धेरै रंग, धेरै आधुनिक फर्निचर, बेडहरू छन् जुन सुपर आरामदायक र ठूला वर्षाका रूपमा बेचिन्छ। त्यहाँ लबीमा एउटा बार छ जसमा केही रातको जीवन हुन्छ तर खानेकुराको सवालमा धेरै आशा गर्दैन।
यो होटल स्थान शुमानको नजिक छ, शहरको सब भन्दा पुरानो र सबैभन्दा ऐतिहासिक हृदय देखि टाढा छ, तर यदि तपाईं एक उत्कृष्ट स्थान खोज्दै हुनुहुन्न भने यस होटलले यस दूरीको लागि दूरी बनाउँछ। सप्तान्तमा राम्रो मूल्य।
एमएएस निवास यो एउटा होटेल हो जुन यूरोपियन क्वार्टर र ब्रसेल्सको बीचमा छ। यदि तपाईं २० मिनेट हिंड्नुहुन्छ भने तपाईं क्याथेड्रलमा पुग्नुहुनेछ वा ललित कलाको रोयल संग्रहालय। यो भवनहरूको एउटा जटिल हो, तीन, बीसौं शताब्दीको शुरुवातदेखि लिएर शैलीको साथ पुनर्निर्मित गरियो। यसैले तपाईं दृश लकड़ी फ्लोर, काठ जलाउने फायरप्लेस, stuccoed छत, र अन्य अवधि विवरणहरू देख्नुहुनेछ।
होटल प्रस्ताव गर्दछ अपार्टमेन्ट र कोठा र आधा आधा सडकमा हेर्छन् जबकि अर्को आधा पछाडि बगैचा मा हेर्नुहोस्। धेरै जसो एयर कंडीशनिंग छन्, त्यहाँ एक एलिभेटर छ र तपाइँ एक दिनको लगभग १ 18 यूरो पार्कि forको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ। त्यहाँ छन् 25 ड्राइभहरू नृत्य प्रकारहरू (रूम्बा, मोड, आदि) का साथ बप्‍तिस्मा लिए।
त्यहाँ छन् सुइट र अपार्टमेन्टहरू बैठक कोठा र भान्साकोठा, आधारभूत, र साथै, उच्च मूल्यको लागि पनि, त्यहाँ एक सानो बगैचा र दुई शयनकक्षहरूको साथ एक अलग डुप्लेक्स छ। डबल कोठाको मूल्य छ १०१.२० युरो बाट कम मौसममा। ब्रेकफास्ट १ separately यूरो छुट्याइएको हुन्छ, तर वाइफाइ नि: शुल्क छ।
ब्रसेल्समा होटलहरूको सर्तमा अर्को विकल्प हो जूम होटल, औद्योगिक शैली, एक निश्चित हावा बाफ गुंडा, हामी भन्न सक्छौं। सबै कुरा फोटोग्राफी वरिपरि घुम्छ, त्यसैले नाम। यो शहरको केन्द्रको दक्षिणी भागमा, सेंट गिलेस र इक्सेलेसको दक्षिणी उपनगरहरू बीचको सिमानामा छ। तपाईं होटलबाट हिंड्न सक्नुहुन्छ ग्रान्ड प्लेस, शहरको मुटु, आधा घण्टा भन्दा बढीमा हिंड्न सक्नुहुन्न।
जुम रातो, पहेंलो, सेपिया, कालो र सेतोमा डिजाइन गरिएको छ। मा काम गर्दछ दुई पुराना घरहरू जुन पुन: साइकल गरियो। रिसेप्शनले २ hours घण्टा काम गर्दछ, त्यहाँ तीन लिफ्ट र टेबुल र कुर्सीहरू सहित बाहिरी टेरेस पनि छन्। त्यहाँ कूल छ Rooms 37 कोठा एकदम सहज, ब्रसेल्सको चित्रले सजाइएको। सबैसँग टेलिभिजन, सेफ र डेस्क छ र केहीले चिया र कफी बनाउने सुविधा प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ ठूला कोठाहरू, XL, सोफा ओछ्यानसहित, तकिया मेनू, सबवे टाईल्ससहित बाथरूम र बुफे ब्रेकफास्ट सेवा जस्ता सबै चीजहरू जुन गर्मीमा छतमा लिन सकिन्छ। पट्टी भ्रमण गर्न लायकको छ किनकि यसको एक छ Bel० बेल्जियम बियरको मेनू र चकलेट को विभिन्न ब्रान्ड। डबल कोठामा शुल्क छ १०१.२० युरो बाट कम मौसममा।
अर्को स्टाइलिश होटल हो ट्रेन होटल। रेलहरूको बारेमा ती पागलहरूका लागि यो उत्कृष्ट छ किनकि त्यहाँ छतमा दुईवटा छन्, जुन सडकबाट देखिन्छ पुरानो गाडीहरु। ती मध्ये एकसँग १ cheap सस्तो र साझा क्याबिनहरू छन् (निद्रा राख्ने झोला र एक तौलिया लिनुहोस् वा भाँडामा लिनुहोस्), र अर्कोसँग यसको आफ्नै बाथरूम र टेरेसको साथ एउटा अद्वितीय रेट्रो-शैलीको सूट छ। स्पष्ट रूपमा, त्यहाँ सामान्य, आधुनिक र लचिलो कोठाहरू पनि छन् जुन अतिथि, दम्पती वा समूहहरू द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
होटेलले ट्रेन बिस्ट्रोमा बिहानको खाजा प्रदान गर्दछ, जसले बुधवार दिउँसो खाजा र बेलुका पनि शुक्रबार मार्फत र शनिबार आइतवार मार्फत खाजा प्रदान गर्दछ। त्यहाँ एक पट्टी र क्षेत्रमा पनि छ Schaerbeek पड़ोस, त्यहाँ धेरै रेस्टुरेन्टहरू छन्। यसमा डबल कोठा सुरू हुन्छ 60 यूरो.
यदि तपाई अरु जस्तो केहि खोज्दै हुनुहुन्छ भने बिस्तर र नाश्ता त्यसपछि विकल्प छ ड्रम। योसँग केवल छ वटा कोठाहरू छन्, प्रत्येक एक समकालीन डिजाइनर र कलाकारको हस्ताक्षरको साथ। होटल धेरै ठूलो छ किनकि यो एक हो १1840० देखि पुरानो हवेली, पछि पाइप कारखानामा रूपान्तरण गरियो। यसका मालिकहरू उनीहरूका पाहुनाहरूसँग नजिक छन् र अक्सर तहखानामा गहना कार्यक्रम वा कला कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दछौं।
होटेल शान्त सडकमा छ, चार्लेरोइ नहर नजिकैको एउटा आकर्षक मोहलमा, बोउलेभर्ड डे बार्थोल्मीबाट टाढा छैन, त्यहाँ कुनै हल्ला र सक्रिय सडक छ भने। यदि तपाईंलाई यो होटेल मनपर्दछ भने तपाईं अनलाइन बुक गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईंले प्रत्येक कोठामा विस्तृत जानकारी पाउनुहुनेछ। कुनै टिभी छैनहो, र होटेलको सामान्य गतिशीलता B&B को हो, त्यसैले खाली ठाउँहरू र क्षणहरू साझा हुन्छन्। डबल कोठाको मूल्य छ १ 130० यूरोबाट सबै बर्ष, ब्रेकफास्ट समावेश र नि: शुल्क वाइफाइ,
अन्तमा, ब्रसेल्समा हाम्रो होटलहरूको सूचीमा आज हामीaमार्फत समाप्त हुन्छौं युवा छात्रावास। यो निद्रा ठीक छ, Gare du Nord ट्रेन स्टेशनको नजिक र रोगीर मेट्रो स्टेशनको नजिक र ऐतिहासिक केन्द्र, भव्य स्थानबाट १० मिनेट पैदल।
यो युवा होस्टल एक मा काम गर्दछ छ कथा भवन, आधुनिक र स्टाइलिश। स्लीप वेल एक नाफा नकमाउने, १ 70 .० को दशकदेखि युवा उन्मुख संगठन हो। यसको स्टाफ मैत्रीपूर्ण छ, जवान छ, साइकल भाडामा दिइएको छ, ब्रुसेल्स वरिपरिको नि: शुल्क हिडडुल प्रदान गरिएको छ, त्यहाँ नि: शुल्क कम्प्यूटर र कोठामा वाशिंग मेशिन र ड्रायर छ। साझा क्षेत्र सामूलीकरणको लागि खेलहरू सामेल गर्दछ।
छात्रावास छ Rooms 37 कोठा, केहि एकल, जुम्ल्याहा र छ जना व्यक्ति बंक बेडको साथ। स्टार, एकल, डबल र ट्रिपल कोठा अधिक मानक छन् र एक सुरक्षित, फ्रिज र टिभी छ। त्यसो भए त्यहाँ परिवार वा तीन वा चार व्यक्तिको समूहहरूको लागि डुप्लेक्स कोठा हुन्छन् निजी टेरेसका साथ र केहि सानो सानो भान्छाकोठा सहित। सबै कोठाको आफ्नै बाथरूम हुन्छ।
दरले पानाहरू समावेश गर्दछ तर तौलियाहरू होइन। बिहानको खाजा साधारण तर राम्रो छ। त्यहाँ बार छ, तर स्थान यति राम्रो छ कि त्यहाँ खाने र पिउनको लागि ठाउँहरू प्रशस्त छन्। डबल कोठामा शुल्क छ १०१.२० युरो बाट कम मौसममा, बिहानको खाजा समावेश गरियो।
अवश्य पनि, ब्रसेल्ससँग धेरै बढी होटेलहरू र आवासका प्रकारहरू छन् तर तपाईंलाई हाम्रो एक सूची मनपर्न सक्छ। राम्रो यात्रा!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » ब्रसेल्स » ब्रसेल्स होटल
स्पेनमा सब भन्दा सुन्दर परिदृश्य
संसारको सब भन्दा सानो देश